Przemysalw Kruk द्वारा इन्फ्रारेड फोटोग्राफी | क्रिएटिव अनलाइन
इन्फ्रारेड फोटोग्राफी एक प्रविधि हो जसले अनुमति दिन्छ प्रकाश स्पेक्ट्रा को एक फोटो जो 700०० र १२०० नानोमिटरहरूको बीचमा छन् जुन मानव आँखाले देख्न मिल्दैन। यसको विविध अनुप्रयोगहरूमा कलात्मक वा वैज्ञानिक समावेश छ।
र यो पहिलो केस हो जुनमा हामी प्रिजेमीस्लव क्रुकको इन्फ्रारेड फोटोग्राफी पाउँछौं जुन यसको लागि जिम्मेवार छ। हामीलाई ती रूखहरूको सुन्दर छविहरू ल्याउनुहोस् त्यो पोलिश भूमिमा अविश्वसनीय तरिकामा खडा हुन्छ। ती रूखहरू उनीहरूको अवस्थित वातावरणको वास्तविक पात्रको रूपमा राख्न सक्षम छ कि फोटो र Kruk आँखा धन्यवाद कि हामी आफ्नो दर्शनमा रमाउन अनुमति दिन्छ।
प्रजेमिसल्व क्रुक एक एमेच्योर ल्यान्डस्केप फोटोग्राफी कलाकार हो जो पोल्याण्ड मा बस्छन्। २० बर्षदेखि उनी आफ्नो प्राकृतिक भूमिमा आफूले सामना गरेका प्राकृतिक दृश्यहरू फोटो खिच्दै आएका छन्।
क्यामेरा यसको उत्तम ई हो अविभाज्य यात्रा साथी र एक क्षणको साथ जुन ती सुन्दर अवरक्त फोटोग्राफहरू लिन सक्षम छ जुन हामीलाई ती भूदृश्यहरू देखाउँदछ जुन एक विशेष र अनौंठो तरीकाको साथ साथ जादुई पनि देखाइन्छ।
क्रुक भइसकेका थिए अवरक्त फोटोग्राफी द्वारा मोहित वा इन्फ्रारेड फोटोग्राफिक टेक्नीक हो र यो उसको ब्याकप्याकमा छ जहाँ यसको लागि ठाउँ छ र त्यसैले ती अद्भुत फोटोहरू लिन्छौं जुन आज हामी सबै तपाईंसँग साझेदारी गर्दछौं। चम्किरहेको प्रकाश र सब भन्दा उच्च कन्ट्रास्टले हामीलाई वरपरको संसारलाई लगभग अनौंठो तरीकाले कब्जा गर्न अनुमति दिन्छ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, फोटोग्राफी को यस प्रकारको माध्यमबाट संसार यो रहस्यमय रूपमा तान्न र यो यसले चिन्तन गर्ने वा प्रशंसा गर्ने व्यक्तिहरूका लागि चीजहरूको दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न सक्दछ। तपाईं उनको मार्फत पाउन सक्नुहुन्छ फेसबुक नयाँ लिन्छ जान्न जारी राख्न।
बाट अर्को विशेष फोटो यहाँ.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » प्रिजेमीस्लव क्रुकको इन्फ्रारेड फोटोग्राफीमा रूखहरूको रोमाञ्चकारी सौन्दर्य
वेब डिजाइन: उत्तरदायी वा अनुकूलन? के फरक छ?